2 bloggers in LA
ပြီးခဲ့တဲ့လက LA ဆိုတဲ့မြို့ကြီးကို ရောက်တယ်။ တည်းတဲ့အိမ်မှာ စာအုပ်စင်ကြီးတခုရှိတယ်။ စာအုပ်တွေ ယူကြည့်ပြီး ပေဖူးလွှာမဂ္ဂဇင်းဟောင်း တအုပ်ထဲမှာ အိမ်ရှင်ရဲ့ပုံကို တွေ့တာနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့လိုက်တယ်။ အပေါ်က ပုံပါပဲ။
ဧည့်သည်က အင်မတန်များတာပဲ။ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကနေ တကူးတက လာသူတွေ၊ LA ဒေသခံ မြန်မာပြည်သားတွေ၊ အိမ်ရှင်ရဲ့ ရပ်နီးရပ်ဝေး မိတ်ဆွေတွေ။
အောက်ကပုံမှာတော့ ကဗျာဆရာ ကိုအောင်ဝေး ဧည့်ခန်းထဲမှာ ထိုင်နေတာ တွေ့ရမယ်။
သူ့နောက်က ဓာတ်ပုံက အိမ်ရှင်မင်္ဂလာဆောင်တုန်းကပုံ။ နံရံပေါ်မှာတော့ ဒေါ်စုပုံ ပန်းချီကား။ ဘယ်သူဆွဲတဲ့ကားလည်း မသိ။
ဒီ အပေါ်ကပုံမှာတော့ မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ ကွန်ပျူတာခုံ။ ပရင့်အောက်ထားတဲ့စာရွက်။ အဲဒီမြို့မှာထုတ်တဲ့ ရတနာပုံနေပြည်တော် လစဉ်ထုတ် သတင်းစာ။ ကွန်ပျူတာမှာတော့ ဒေါ်စုပုံ။ ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာတော့ ကြောင် ပုံ။
ကြောင်ကိုပွေ့ထားတာလည်း အိမ်ရှင်ပါပဲ။ သူက ဘောလုံးပွဲကြိုက်တယ်လို့ ယူဆရတယ်။ ယူဆရတယ် ဆိုတာက တခြား ဘောလုံးပွဲဝါသနာအိုးတွေနဲ့ မတူဘူး၊ ဂိုးတော့မယ်၊ ဟာ နည်းနည်းပဲလိုတယ်၊ ဆွဲထား ဆွဲထား၊ ကန်လိုက်လေကွာ၊ ဟာ- သောက်သုံးကိုမကျဘူး ဆိုတဲ့အသံတွေ ထွက်လာတာ မကြားရဘူး။ ပွဲကြည့်တာ မန်ယူအသင်းနည်းပြ အဲလက်စ်ဖာဂူဆန် ထက်တောင် ငြိမ်တဲ့ပုံရှိ။ ဘော်လုံးကွင်းထဲမှာမဟုတ်လို့လည်း ဖြစ်နိုင်း)
ဒီပုံမှာတော့ မစ္စတာအောင်သာငယ်။ ဆံပင်ရှည်ရှည်နဲ့ ဘလော်ဂါ။ ပြီးတော့ သူ့မိတ်ဆွေတွေ။ စာပေဟောပြောပွဲ အခမ်းအနားပြင်နေတာ။ သူက ကျနော်ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုမှ ကမန်းကတန်း နောက်ခံပိတ်ကားကို သွားကိုင်လိုက်တာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ သိပ်မမှတ်မိတော့ဘူး။း) ဓာတ်ပုံအရဆိုရင်တော့ လိုအပ်သည်များကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်သူ။း)
သူကတော့ ဟိုနေ့ကခွင့်တောင်းသေးတယ်၊ အဲဒီပွဲအကြောင်းရေးထားတဲ့ပို့စ်မှာ ကျနော့်ပုံ ထည့်လိုက်ရမလား တဲ့။ ကမန်းကတန်း နိုး လို့ ပြောလိုက်တယ်။
ခုတော့ ဒီပို့စ်မှာ သူ့ပုံကို ခွင့်မတောင်းဘဲ ထည့်သုံးလိုက်ပါပြီ။ [ ကိုအောင်သာငယ်၊ ခင်ဗျား ကျနော့်ပုံတင်မယ်ဆိုရင်တော့ ခွင့်တောင်းပါဗျာ။ ] "အောင်သာငယ် ဆိုတဲ့ ဘလော့ဂ်ကို ကျနော့်စာမျက်နှာမှာ လင့် ချင်လို့ LA အထိ လာတွေ့တာဗျာ" ဆိုပြီး ရွှီးလိုက်ရင် ယုံကြည်ပုံ မရတာကြောင့် မပြောလိုက်မိဘူး။း)
စင်ရှေ့မှာ ခင်းထားတဲ့ ဗုံတွေက အမြင်ကောင်းအောင်၊ ရိုးရာမမေ့အောင် အလှဆင်ထားတာတွေဖြစ်မယ်။ စာပေဟောပြောပွဲမှာ မောင်သာရ၊ မောင်စွမ်းရည်၊ အောင်ဝေး ဆရာသုံးပါးစလုံး ဘယ်သူကမှ အဲဒီဗုံတွေ မတီးကြပါဘူး။ ။
မြင်ဖူးချင်နေတဲံ့ ဘလော့ဂါ ၂ ယောက်နဲ့
ဘလော့ဂါ ၁ ယောက်ရဲ့ အရင်းနှီးဆုံး သူစိမ်း တစ်ယောက်ကို မြင်ဖူးခွင့်ရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
( ငယ်ငယ်တုံးက ပုံဖြစ်နေတာရယ်၊ ကျောခိုင်းပုံဖြစ်နေတာရယ်ကတော့ မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့လေ.. :(
ဟုတ်ပါ့ အပေါ်က စင်စင်ပြောသလိုဘဲ မြင်ဘူးချင်တဲ့သူကို မြင်လိုက်ရပြီ။ အရိပ်ကြီးတောင် အစစ်ပါသေး။ ကိုအောင်သာငယ်ကတော့ ကျောဘဲမြင်ရလို့  သိပ်မကျေနပ်
ဖော်ကောင်လုပ်သော ဂျက်လီ.. တွေ့ကြသေးတာပေါ့လေ..။
ဟာ..မင်္ဂလာဆောင်တုန်းက ပုံလေးက လျတယ်။
အစ်မရဲ့ ကိုအကျော်ကလဲ မဆိုးဘူးပဲ။
ကိုဂျက်လီ... ခင်ဗျားကို ကျနော် တရားစွဲထားပြီ...
မမိုးချိုးသင်း နဲ့ဆရာအောင်ဝေး ကိုတွေ့ ဖူးသွားပြီး အန်ကယ်အောင်ကိုက သူ့ဘလော့မှာ တစ်ခါမြင်ဖူးတယ် ကြော်ငြာတွေ့ လို့ လာကြည့်တာ ကျေးဇူးးဗျ ။
ဂျက်လီ ?? အဟဲ .. ဂျက်လီ ဆိုလို့ ကိုဇာနည်ပုံနဲ့ အင်တာနက်က ဂျက်လီပုံရှာပြီးတိုက်ကြည့်လိုက်တယ်. .. ဘယ်နားသွားတူလည်းတော့ ပြောတတ်ဘူး။ (ဒီဂျက်လီက နည်းနည်းပိန်နေတယ် အားဆေးများများသောက်)
December 6, 2008 at 4:56 AM